स्वास्थ्य Archives | SawalNepal
» राष्ट्रिय खबर
» सवाल संबाद
एजेन्सी– शिशु गर्भमा रहुन्जेल आमाले खाएको खानाबाट नै पोषण प्राप्त गर्दछ। तर जन्मिएपछि उसको खानपानका परिवारले निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ। खानपानको सामान्य चिजले पनि बच्चालाई हानी पुर्‍याउन सक्छ। ३ वर्षको उमेरसम्म बच्चालाई जे ख्वाइन्छ, त्यसले उसको पूरा जीवन र बानीमा सिधा असर पर्छ। आखिर ३ वर्षसम्मका बच्चालाई के खुवाउने त ? १. जन्मको पहिलो ६ महिनासम्म
प्याज– प्याजमा लिभर इन्जाइमलाई सक्रिय बनाउने क्षमता हुन्छ, जसले शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। यसमा अधिकमात्रामा हुने अलाइसिन र सेलेनियम नामक दुईवटा प्राकृतिक तत्वले कलेजोलाई सफा पार्छन्। अंगुर– अंगुरमा भिटामिन सि र एन्टिअक्सिडेन्ट उच्च मात्रामा पाइन्छ, जसले कलेजोलाई प्राकृतिक रुपमा सफा पार्छ। एक गिलास अंगुरको रसले कलेजोलाई विषाक्तमुक्त गर्ने इन्जाइम उत्पादनमा सहयोग
पेटको अल्सर पाचन प्रणालीसँग जोडिएको एक एउटा रोग हो । जुन समस्याको समयमै उपचार भएन भने खतनाक सावित हुन्छ । उक्त रोग लाग्दा आन्द्राको भागमा घाउँ वा प्वाल हुन्छ, खास यो रोग पेटमा अम्ल बढ्नाले धुम्रपान एवम् नसायुक्त पदार्थको सेवनले अत्यधिक स्टिरोयड्सको सेवनले, अनुवांशिक कारण र अत्यधिक तनावका कारण लाग्दछ । जसबाट पाइलोरी नामक जीवाणुले
काठमाडौँ । परिवर्तित जीवनशैली र खानपानको कारण मानिसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु आउने गर्छन् । विशेषत हामीले दैनिक गर्ने भोजनमा ख्याल नगर्दा अनेकौ समस्याको सिकार बन्नुपर्ने हुन्छ । भोजनको भोज्य पदार्थलको छनैट गर्दा रोग, बल, उमेर, सत्व, मानसिकता आदिलाई आधार मानेर छनोट गर्नु महत्वपूर्ण रहेको छ ।सन्तुलित, पौष्टिक, मौसमीय र क्षेत्रीय आहार सेवन गर्नाले मुटुरोगलाई नियन्त्रण गर्न
शरीरलाई स्वस्थ र फुर्तिलो बनाउनको लागि खानासँगै व्यायामको पनि निकै ठूलो भूमिका हुन्छ। बिहानै उठेर मर्निङ वाकमा निस्किनेहरुकाे संख्या हिजाेआज बढिरहेकाे छ। वास्तवमा स्वस्थ शरीरकाे अनिवार्य शर्त हाे हिँडाइ। यसलाइ हामीले गर्ने व्यायाममध्येको सबैभन्दा सरल र उपयोगी समेत मानिन्छ। हिँडाइले शरीरलाई सही आकारमा ल्याउन मद्दत गर्छ। तौल व्यवस्थापन गर्न, रक्तचाप नियन्त्रण गर्न, शरीरमा झड्का, स्तन क्यान्सर र
बालबच्चालाई जंकफुड होइन, चोकरयुक्त खानेकुरा
अहिले हाम्रा छोराछोरीको खान्की के छ ? मम, चाउमिन, बिस्कुट, ब्रेड, चिप्स । यी अधिकांश खानेकुरामा मैदाजन्य हुन् । मैदाजन्य परिकार धेरै छन् र स्वादिलो पनि लाग्छ । तर, स्वास्थ्यका लागि त्यती फाइदाजनक छैन । मैदाजन्य परिकारकै कारण उनीहरुमा मोटोपन, मधुमेह जस्ता अनेक समस्या देखापर्ने गर्छ । जबकी उनीहरुलाई स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त राख्ने हो भने चोकुरयुक्त
यस्ता छन्, खुट्टा बाउँडिने कारण र रोकथामका उपायहरु!
खुट्टा बाउँडिने समस्यालाई निकै समस्यालाई अंधिकाशले सामान्य समस्याको रुपमा लिदै आएका छन् । सामान्य अर्थमा खुट्टाको तिघ्रानिर अथवा पिँडौंलाको मासु फर्कनुलाई खुट्टा बाउँडिनु भनिन्छ । यस्तो हुदाँ दुखाई सहन निकै गाहे हुन्छ । विशेषगरी आराम गरेको बेलामा एक्कासी तिघ्रा र पिडौंलाको मासुको भाग खुम्चिन गई बाउँडिन्छ । यस्तो विशेषतः रातको समय हुन्छ । यस्तो समस्यालाई
ब्लड प्रेसर हाई भएका व्यक्तिले के खाने ? के नखाने ? जानी राखौं
हाई बीपी हृदय रोगको इशारा हुन सक्छ । डायटमा सैचुरेटिड फैट जस्तो कि मक्खन, घ्यू, तर आदि कम गर्नुस् । किनकी यसले मुटुको नली बन्द हुने खतरा बढ्छ । जति सकिन्छ, लो फैट डायट लिनुस् ।– कैल्शियम, मैग्नीशियम र पोटैशियम आदि प्रचुर मा त्रा मा खानुस् । यो तत्व दूध, हरियो साग, सब्जीहरू, दाल, सुन्तला,
डा. गोविन्द केसीले राखे सरकारलाइ ७ बुदे माग, हेर्नुहोस् माग सहित
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएका सर्वविदितै छ। साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्‍याउने काम छाडेर